Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Geerida Males Zenawi, dalka Ethiopia iyo Deegaanka Somalida?
Geerida Males Zenawi, dalka Ethiopia iyo Deegaanka Somalida?
August 22, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL: Geerida hoggaamiyihii dalka Ethiopia ahna guddoomiyaha EPRDF iyo madaxii halgankii dheeraa ee ururka TPLF ay la galeen dawladdii dhergiga wuu geeriyoodey waxaana guud ahaan adduunka laga dareemay geerida Males gaar ahaanna waxaa si aad looga dareemay qaaradda Afrika iyo khaas ahaan geeska Afrika oo uu ahaa hoggaamiye meel mariya middiisa. Kasakoow adduunka iyo doorkii uu ku lahaa goobaha caalamiga ah, gaar ahaan dhaqaalaha iyo amniga haddana dawladda Ethiopia ayaa waydey hoggaamiyihii ugu danbeeyey ee talada dalka hayay 21 sano ee ugu danbeysey. Haddaba geerida Zenawi maxay ka baddali kareysaa siyaasadda Ethiopia iyo khaasatan midda deegaanka Soomaalida.
Dalka Ethiopia waa dal qaddiimi ah in badanna soo jirey. Zenawi waxuu noqonayaa hoggaamiyihii ugu horeeyey ee isagoo xilka haya u dhinta si caadi ah oo aan la dilin. Zenawi waa aabihii nadaamka qawmiyadaha Ethiopia waxuuna ahaa hoggaamiye urur isagoo yar markii uu ka tagay jaamicadda Addisababa oo uu baranayay dhakhtarnimo kuna biirey ururkii TPLF ee la dagaamalayay dawladdii Dhergiga.
Dalka Ethiopia waxuu kamid yahay dalalka dhanka isbaddalka siyaasadeed uusan ku badneyn oo marwalba daggan tusaale ahaan laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka waxaa ka dhacay saddex is baddal oo kaliya waana midda Ethiopia ka dhigta iney noqoto hoggaan geeska Afrika iyo saaxiib waddamada caalamka. Xayle Selaase, Mingiste iyo Males ayaa soo xukumayay waddanka muddaas ku dhaw qarninga marka la isku daro, balse Males waxuu kaga duwanyahay waxuu lahaa xisbi iyo nadaam sii wada hawshii uu ka tagay meeshii labadii hoggaamiye ee ka horeysey ay ahaayeen kaligood qawmiyado badanna dhulka afka u galiyey colaad badanna kasbaday.
1991 markii dawladdii Dhergiga meesha laga saarey ururka TPLF ee uu Zenawi xukumay waxay ka wareegeen nadaamkii shuuciga oo ay kusoo dagaal galeen kadib markii waddamada ree galbeedku ay la kulmeen kuna qanciyeen inuu u talaabsado dhanka Dimuqraadiga si ay u caawiyaan waxeyna ku taageeraan nadaamka qawmiyadaha iyo federaaliga oo ah midka maanta Ethipia wax ku qaybsato.
Wax kasta oo la sheego waxaa hubaal ah in maanta Ethiopia ay tahay meel la ka hodasan sidii hore ee ay ahayd muddo badan dhaqaalaheeduna uu kor usocdo iyadoo noqotey meesha geeska Afrika laga dhoofiyo Tamarta laga dhaliyo biyaha iyadoo ay walina socdaan mashaariic badan. Haddii aad Ethiopia moogeyd shan sano markaad ku laabato waxaad dareemeysaa isbaddalka dhaqaale iyo kaabayaasha hormarka oo si xawli ah uga socda ama u hirgalay.
Zenawi waxuu ahaa shakhsi aan u joojin dawladaha waaweyn sida Maraykanka iyo Ingririiska waxuuna nin middiisa ka raaca haddana aftahan ah oo maskax badan kuna qasba caalamku iney taageeraan Ethiopia haddana aysan u yeedhinin waxey iyagu rabaan.
Ethiopia maanta sagaal qawmiyadood midwalbana meel ay joogtaa. Ninka lagu baddalay waxuu kasoo jeedaa qawmiyad yar oo la dhaho Walayta waxuuna mar soo ahaa madaxweynaha shucuubta Koonfureed waxaana lagu wadaa in siyaasaddii uu jeexey Zenawi lagu meel maro muddooyinka soo socda. Kasakoow qawmiyadaha Ethiopia Zenawi waxuu gacan weyn kulahaa siyaasadda Afrika iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya oo siyaabo kala duwan looga xusey geeridiisa. Maamulka Somaliland iyo Puntland iyo Dawladda sii dhamaaneysa ee Sheekh Shariif ayaa si weyn uga tiiraanyoodey geerida iyagoo aan qaranin sida ay uga xunyihiin isla markiina ku dagdagay iney diraan tacsidooda si shaahid ah oo aan qarsoodi lahayn.
Haddaba faalada nuxurkeedu waa saameynta geerida Zenawi iyo Deegaanka Soomaalida?
Ugu horeyn deegaanka Soomaalidu masoo marin maalin uu ka wanaagsan yahay gaar ahaan dhawrkii sano ee u danbeeyey waxaa hirgalay waxyaabo badan oo taariikhi ah waxaana la odhan karaa Deegaanka Soomaalidu waxuu qabsadey jid dheer oo hormarineed waxii dhimanna waa wax la gaadhi karo. Inkastoo xaaladda deegaanku ahayd mid cakiran iyo meel nabadgaliyadeedu tahay mid aan jirin hadana maanta waxbadan ayaa iska baddalay.
Geerida Males guud ahaan si aad ah ayaa looga dareemayaa oo waxuu ahaa Zenawi qofkii ugu horeeyey ee furay nadaamka qawmiyadaha iyo wadaagga oo markii ugu horeysey wax u ogolaadey qawmiyada Soomaalida. Maanta Deegaanka Soomaalida waxaa ka hawlagala ku dhawaad boqol kun oo shaqaale ah oo dhamaantood u shaqeeya xukuumadda DDS, waxaa jira booliis, ciidan, iyo dhamaan adeegyadii aasaasagii ahaa ee bulshada kuna wada baxaya luuqadda Soomaaliga. DDS maanta waxaa jooga ciidamo qalabka sida oo Soomaali ah oo aad ubadan sugayana amaanka waxaa jira xarumo badan oo xuddun u ah koritaanka dhaqaale. Intaas kasakoow waxaa socda dadaalo looga faaiideysanayo biyaha iyo kheyraadka waddanka oo aan suura gal ahayn muddooyin hore.
Haddaan ku noqono su aashii hore waxaan odhan kareynaa in geerida Zenawi aysan wax saameyn ah oo gaar ah aysan ku yeelan doonin Deegaanka Soomaalida waxeyna noqoneysaa uun in lasii wado waxii socdey.
Waqtiga ay geerida Zenawi kusoo aadday ayaa ah xilli shacabka deegaanka Soomaalida intooda badani dal iyo dibadba ay ubateen dhanka nabadda iyadoo aad loo xasuusto safarkii Zenawi uu ku tagay dalka Norway oo qurba joog badanna oo kasoo jeeda DDS ay soo dhaweeyeen lana kulmeen meesha qawmiyada Axmaarada ahi ay ku banaanbaxeen.
Qurba joogta DDS ee ku nool daafaha caalamka ayaa noqdey kuwa ugu taageerada badan nadaamka Federaalka ah iyadoo Axmaarada iyo Oromada Qurba joogta ahina ay noqdeen intooda badan mucaarad. Arintan oo lagu fasirey waxyaabo badan oo uu horeysey heshiiskii UWSLF iyo EThipia iyo socdaaladii xukuumadda DDS ee dibadaha ayaa haddana waxaa muuqata iney tahay “Oohinta Oohinta Iiga duw”. Axmaarada iyo Oromada mucaaradkoodu ma ahan oo kaliya iney necebyihiin maamulka Ethiopia balse waxey kasoo horjeedeen waxyaabo badan oo shacabka Sooomaalida ka dhan ah uguna horeyso nadaamka federaalka ah oo ah midka kaliya ee xaqiijiniya in Soomaalidu wax ka hesho xaqeeda.
Dawladda Ethiopia waa dawlada hela deeqda ugu badan ee caalamku bixiyo waaana dawlad saaxiib la ah caalamka oo dhan. Waloow ay jiraan qawmiyado u arka iney iyagu yihiin hoggaankii dhaxalka ee waligood soo xukumi jirey haddana laga maroorsadey haddana waxaa cad jiritaanka Ethiopia inuu kusii joogi karo nadaamka Federaalka ah oo Qawmiyadaha, Tigreega, Soomaalida iyo Canfarta siiyey waxyaabo badan oo aysan waligood helin haba lakala badsadee. Mucaaradka Axmaarada iyo Oromada ee dibad joogga ah ayaa fikirkaas kasoo horjeeda una arka in Ethiopia lagu celiyo sidey ahaan jirtey boqolaal sano ka hor.
Zenawi waxuu la godgalay riyo ah in Ethiopia kamid noqoto waddamada leh dhaqaalaha dhexdhexaadka ah waxuuna dhagax dhigey mashruuca biya xidheenka Nile oo dunida ka yaabtey waxuuna ku hanweynaa inuu arko dhameystirka hawlahaas iyo kuwa kasocda Deegaanka Soomaalida ee beeraha, jidadka iyo shidaalkaba isugu jira. Waxaa lagu wadaa in hawlahaasi sii socdaan.
Kooxda Asmara oo bilihii ugu danbeeyey kujirey waanwaan ay rabeen iney Ethiopia kula heshiiyaan ayaa geerida Zenawi ku noqoneysaa mid adag iyagoo ku sheegey inuu ahaa ninka kaliya ee ay is garanayaan ama fahmi karay. Lama oga dabqaadkii la sheegey ee udhaxeeyey meel uu ku danbeyb doono iyadoo aysan hadda jirin awood ciidan iyo khatar ay ku hayaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan goboladii dhawrka ahaa ee ay ka dhaqdhaqaaqi jireen.